Wasiir Goodax: Manhajka Dalwadda ha la Qaato
Sida ay faafisay Warbaahinta Dowladda, Wasaaradda Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare ayaa fartay, dugsiyada iyo dalladaha waxbarashada in ay u diyaar garoobaan hirgelinta Manhajka Dowladda ee dugsiyada hoose dhexe, laga billaabo fasalka 1-aad illaa 8-aad. Manhajkan ayey dhawaanahanba dowladdu diyaarintiisa ku howlaneyd.
War-saxaafadeedkan oo uu ku saxiixan yahay Wasiirka Waxbarashada, Hiddaha iyo Tacliinta sare, C/hi Goodax Barre, ayaa lagu sheegay in laga bilaabo bisha Agoosto ee sannad dugsiyeedkan 2019/2020, ay dhinacyadaasi kor ku xusan waajib ku tahay in ay meel-mariyaan manhajkan, lagana hirgeliyo dugsiyada dalka oo idil.
War-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Wasaaraddu ay sameyneyso tababar macallinimo, kormeer iyo dabagal joogta ah oo ay ugu kuurgaleyso cidda dhaqangelineysa manhajka iyo kuwa aan fulineyn.
Wasaaradda ayaa uga digtay dalladaha waxbarashada iyo iskuullada in ay fulinta amarkan iska indho-tiraan. Warsaxaafadeedka ayaa lagu xusay in cidii ka gaabsata adeegsiga manjahkan cusub ay wasaaraddu ka qaadi doonto tallaabo sharci ah.
“Rukhsadda ayaa lagala noqon doonaa iskuulkii ka gaabsada fulinta majhankan” ayaa war-saxaafadedka lagu yiri.